Isgoysyada shucaaca ee hoosta hoose ee sagxadaha vinyl sida habboon ee loo isticmaalo sagxadaha alwaaxda hoostooda iyo sagxadaha sagxadda si ay u siiyaan guriga dahaarka dhawaaq wanaagsan iyo qaylada naxdinta leh ee deriska marka ay ku socdaan kabaha sare. Xumbo IXPE-da casriga ah ee hoose waxay si toos ah u jiifsan kartaa sagxadda hoosteeda marka lagu rakibo duub yar, nooc kale, soo-saaruhu wuxuu sidoo kale horay u sii dhejiyay xumbo IXPE ee ka hooseysa guddida sagxadda si ay u kordhiso lakabka silbashada ee ilaalinta xirmooyinka la safeeyey ee vinyl panels dhinaca dhaawac. Xumbo Meishuo waxay bixisaa labada nooc.
Xumbo sagxada Meishuo ee hoos yimaadku waa sagxaad aasaasi ah oo la soo saaray iyadoo la isticmaalayo unug xiran oo polyetylen ah oo microcellular ah. IXPE (Irradiated Cross-linked polyethylene) xumbo waa walxo polymer ah oo leh dahaarka kulaylka weyn, nuugista dhawaqa, iyo sifooyinka caabbinta uumiga.
Isgoysyada shucaaca ee hoosta hoose ee sagxadaha vinyl sida habboon ee loo isticmaalo sagxadaha alwaaxda hoostooda iyo sagxadaha sagxadda si ay u siiyaan guriga dahaarka dhawaaq wanaagsan iyo qaylada naxdinta leh ee deriska marka ay ku socdaan kabaha sare. Xumbo IXPE-da casriga ah ee hoose waxay si toos ah u jiifsan kartaa sagxadda hoosteeda marka lagu rakibo duub yar, nooc kale, soo-saaruhu wuxuu sidoo kale horay u sii dhejiyay xumbo IXPE ee ka hooseysa guddiga sagxadda si ay u kordhiso lakabka-ka-hortagga ee ilaalinta xirmooyinka la safeeyey ee vinyl panels dhinaca dhaawac. Xumbo Meishuo waxay bixisaa labada nooc.
● ILAALINTA ACOUSTIC OO FIICAN
Waxay siisaa ilaalinta qaylada sagxada-dabaq ah iyo cag-ku-dhac aad u wanaagsan
Way dhaaftay shuruudaha Xeerarka Dhismaha lebbiska
● ILAALINTA QOYSKA OO FIICAN
Caqabad qoyaan ku dhex dhisan oo heersare ah
Looma baahna filimaan dheeri ah
Ka sare maray heerarka warshadaha
Wuxuu ku daraa R-qiimaha sagxadaha qaboobaha
Ku habboon isticmaalka sagxadaha kulaylka iftiinka leh
Waxay ka caawisaa baabi'inta cilladaha yar yar ee sagxadaha hoose waxayna bixiyaan dusha socodka raaxada leh
Tilmaamaha isku-buufinta ee aad u fiican ayaa kaa caawinaya ilaalinta sharafta nidaamka sagxadaada
● SAAXIIBAAN BAY'ADDA
Si buuxda dib loo warshadayn karo
Caaryada iyo caarada u adkaysta
Lagu taliyay rakibaadda sagxadaha deegaanka iyo ganacsiga
● NIDAAMKA SABAQA
Si loogu isticmaalo nidaamka sagxadda alwaax ee hoostiisa laminate /Ingineered / adag
● HABKA RAKKA AH
Sabaynaysa / Ciddi Hoosaysa / Laba jeer xabagta hoos u dhigta
Hore: Filliyaha kala-goysyada ballaarinta
Xiga: Dahaarka saqafka
Koofiyadaha DIY iyo koofiyadaha
Xumbo khiyaali ugaadhsiga
Gaadhiga maqalka ah
Xumbo polypropylene acoustic dabaqa hoose ee hoose